Uthotho lweCoaxial Cable
Izixhobo ezinxulumene noko
Intambo yeCoaxial evuzayo
Uluhlu lweLan Cable
Izixhobo ezinxulumene neLan Cable
Uluhlu lweCandelo loKhetho
Intambo yeCentral Loose Tube
Izixhobo ezihambelanayo zeContent Optical
Umtya Cable Tube Cable
Imveliso ye5G evela eChengdu Datang Unxibelelwano Cable Co, Ltd yamkelwe kwintengiso
Kutshanje, uChengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd. uphumelele ngempumelelo ibhidi ye-China Iron Tower Co, Ltd .5 G intambo yemveliso engaphantsi kwemveliso kunye nokuncedisa iprojekthi yokuthengwa kwe-e-commerce kuqala, ukuphumelela izabelo ezingama-50. Isiphumo sokwenza i-5G b ...
Ukwandiswa kwesimo seemeko zentambo ye-coaxial evuzayo
Emva kwe-3G, i-4G iphuhlisiwe kubunzulu. Okwangoku, unxibelelwano ngeselula luhamba luye kwi-5g. Kwi-2020, i-bugle yesicelo sentengiso se-5g iye yavakala, kwaye onke amazwe ehlabathini ayayikhuthaza inkqubo ye-5g. Kwiminyaka yakutshanje, Ch ...
Intengiso yentambo enganyangekiyo emlilweni iya kufikelela kwi-1.76 yezigidigidi zeedola zaseMelika ngo-2018
ngomphathi ku 18-06-14
Ngokwengxelo yakutshanje yeemarike kunye neemarike, intengiso yentambo enganyangekiyo emlilweni kulindeleke ukuba ikhule ukusuka kwi-1.76 yezigidigidi kwi-2018 ukuya kwi-2.06 yezigidigidi ngo-2023, nge-CAGR ye-3.2% ngeli xesha. Intengiso yentambo enganyangekiyo ngomlilo ...
Ikamva eliqaqambileyo lomzi-mveliso weCandelo
ngomphathi ku 17-12-15
Ngophuhliso olukhawulezileyo loqoqosho lwase China, ucingo kunye noshishino lweentambo, njengenxalenye ebalulekileyo yecandelo lezorhwebo lamandla, nalo liyachuma. Ngokukodwa kule minyaka idlulileyo, uphuhliso lwezoqoqosho lwase China lujamelene nobunzima ...
Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd. iphumelele iimbasa ezimbini zokwakha ezikrelekrele kwimarike China
ngomphathi ku 17-11-30
Nge-16 kaNovemba, "Ubukrelekrele" bonwabela ithuba "lokwakha" izinto ezintsha, phantsi kwesikhokelo seNjineli yoBunjineli boYilo lweChina kunye noMbutho woYilo kwaye uxhaswe yiBeijing "Intellig ...
Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd. iphumelele iingcingo 10 eziphezulu ebanzi kushishino lokwakha okrelekrele
ngomphathi ku 17-11-18
Ingqungquthela ye-18 ye-China yoKwakha ubuNtlola yeHlabathi yabanjwa nge-7 kaDisemba nge-Guangzhou Oriental Hotel. Bonke abahlanganisi benkqubo yengingqi, abathengisi bezitishi, abavelisi, abasebenzisi bokugqibela kunye nokwakha iingcali ezaziwayo ezaziwayo kunye nangaphezulu kwe-1000 ...
Chengdu Datang Unxibelelwano Cable Co., Ltd iphumelele imbeko iphambili kushishino lokwakha okrelekrele-Top 10 ukwenziwa cabling Brand Brand ngo-2015
ngomphathi ku 15-12-15
Umsitho waminyaka le wamazwe aphesheya-iNgqungquthela ye-China yoKwakha ubuNtlola kwiNgqungquthela ye-China yeZakhiwo zoBukrelekrele boKwakha i-2015 (ishunqulelwe njenge-CIBIS) iyafana nesiphelo esiphakamileyo, esitsha kunye nesiphelo sobunkokheli obukrelekrele ...
Umboniso weDubai Gitex
ngomphathi ku 15-10-27
Nge-18 ka-Okthobha u-2015, e-Dubai, e-UAE, Ilanga belitshisa bhe. Kwesi sixeko sifudumeleyo kwaye singaqondakali, Owona mboniso ubanzi ubanzi wonxibelelwano kunye namashishini e-IT kuMbindi Mpuma —— Iveki yeTekhnoloji ye-GITEX 2015 (ebizwa ngokuba yiDubai) ivulwe kakuhle. IDub ...
Chengdu Datang Communication Cable Co., Ltd. iphumelele ibhaso "kwibhetshi yokuqala yeziko lokudala umgangatho wobugcisa kwiPhondo laseSichuan"
ngomphathi ku 15-05-07
Isithili se-Chengdu Hi-tech esentshona yindawo yokuqala yokubonisa umgangatho wokumgangatho ophezulu kumzi-mveliso kunye nokuyila okusemgangathweni njengomxholo ophambili. ICandelo loLawulo loMgangatho waseSichuan kunye neSebe lezeNzululwazi neTekhnoloji liphehlelele i-f ...
Indlela ye-10Xixin, iSithili seTekhnoloji ePhakamileyo, eChengdu, China